IKHONKCO YEPHULI YECANTILEVER (IEDGE KUNYE NECOPING DESIGN ISIKHOKELO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Ikhonkco yePhuli yeCantilever (iEdge kunye neCoping Design Isikhokelo)
Nantsi isikhokelo sedreyini yedreyini yesikhokelo sokuyila kubandakanya ukuba yintoni kunye neentlobo zokulwa kunye nemiphetho. Iphuli engaphakathi emhlabeni lukhetho oluhle kuyo nayiphi na indawo yangasemva. Yeyona ndawo iphambili efanelekileyo yokuhlala, i-barbecues zasehlotyeni, kunye neendibano zosapho. Inxalenye yezigqibo ezininzi ekufuneka uzenzile xa ufaka iphuli yangaphakathi komhlaba luhlobo lwendawo yokuhombisa.
Yintoni iCantilever Pool Deck?
Ukujamelana neChibi leKhonkrithi laseCantilever
Iphuli yePhuli yeCantilever
Iingxaki zechibi leCantilever Pool
Umgangatho wamachibi okubhukuda kukuhombisa ujikeleze iphuli exhonywe kancinci ngaphezulu kodonga lwedama. Abanini bamakhaya abaninzi bakhetha ikhonkrithi kumgangatho wamachibi angaphantsi komhlaba. Ikhonkrithi isetyenziselwe Umgangatho wamachibi ugqityiwe ukusukela ngeminyaka yee-1980 kwaye sesona sigqibelo sithandwa kakhulu.
Umgangatho wephuli yenye yezona zinto zibalulekileyo nezibonakalayo zoyilo lwechibi. I-Cantilever echibini leephuli zihlala zigqiba i-bullnose kwaye zibonelele ngendlela ecocekileyo nenhle echibini. Kwesi sikhokelo, siza kuvavanya ukuba yintoni eyenza ukuba indawo enamanzi okuqubha i-cantilever, yeyiphi indawo ekujongwa kuyo i-cantilever, kunye neengxaki ezinokubakho xa usebenzisa i-cantilever deck echibini ledama elingaphantsi komhlaba.
I-Cantilever ibhekisa kumqadi oxhonywe ngaphezulu komda kwaye uzinze kwelinye icala kuphela. Kwakhona ligama eliqhelekileyo lisetyenziselwa ukuchaza into eyenza ukugqithisa, njengendawo yokubhukuda ye-cantilever.
Eli candelo loyilo lwechibi lisetyenziswa xa ufaka iphuli yomhlaba kwaye unikezela umda ogudileyo, ogqityiweyo kumgangatho ojikeleze wona. Igqibezela umphezulu wephuli kwaye inokufakwa kusetyenziswa iintlobo ezahlukeneyo zezinto.
Izinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo zibandakanya isamente, iinkuni, izitena, kunye ilitye lendalo , Ngamnye ukhetho oluhle xa ujonga uyilo lwechibi.
Umgangatho wedama elingaphantsi komhlaba udibana nomphezulu womda wedama, kwaye umda ubizwa ngokuba kukujongana. Ukujamelana neebhulorho iintlanganiso zephuli kunye nepatio, ukugqiba umsantsa.
Ukuqubisana nephuli kusebenza njengesakhelo esikhusela iphuli kunye nokugcina amanzi ekonakaliseni ipaki ejikelezileyo. Ukujongana nephuli kuyasebenza kwaye kukwabolekisa ngomhlobiso wokuphucula ubuhle bechibi.
Ukupheliswa kwephuli yekhonkrithi yeCantilever ichaza imiphetho yedama elingaphantsi komhlaba kwaye isebenza ngokungathi ngumda wegadi. Inamanzi kwaye iyigcina ukuba ingaphumi ngaphandle.
Ukujongana ne-Cantilevered kufuneka kugalelwe kwifom eyenza i-bullnose edge eyolula kancinci ngaphezulu komda wedama. Yeyona ndawo ixhaphakileyo esetyenziswa ziikontraki zephuli xa befaka iphuli yomhlaba.
Isamente lukhetho olufanelekileyo kolu decking ngenxa yezizathu ezininzi.
Inika indawo yokutsala ubungqina
Ikhonkrithi lulondolozo olusezantsi
Ikhonkrithi inokufakwa isitampu yoyilo olwahlukileyo kunye nokugqitywa
Kukho iinketho ezimbalwa zombala wekhonkrithi
Ukupheliswa kwephuli yekhonkrithi yeCantilever kungagalelwa kwiifom okanye kunokufakwa kwi-precast ikhonkrithi. Ukujamelana nokuqala kwangaphambili kuza njengeebhloko ezenziwe kwangaphambili kwaye kuyafumaneka kwimixholo eyahlukeneyo, iipateni kunye nemibala.
Olu khetho lwenza ukuba umninikhaya afake ikhonkrithi ngokwabo. Amacandelo afakelwe kusetyenziswa udaka kunye nokubamba, kwaye akukho zixhobo zikhethekileyo ziyafuneka. Ukujongana nesamente kufuneka kutywinwe ngetywina elingena kwisimo sezulu elingathathi cala kwi-pH.
Isiziba se-cantilever echibini asibonakali sihle kuphela, kodwa umphetho unemisebenzi emininzi. Umphetho we-cantilever awuphelelanga kuphela ekujongeni ukubonakala komgangatho wedama kodwa ukwakhusela ekutyibilikeni ngengozi echibini.
Umgangatho ophakanyisiweyo kancinci ubonelela kakuhle xa abantu behamba kumgangatho wedike elingaphantsi komhlaba.
Ikwabonelela ngesithintelo ngokuchasene namanzi angena emanzini echibi. Umphetho wecantilever umisa amanzi agqithisileyo ekubeni abaleke aye echibini. Ikwayindlela entle yokugcina ulwelo olungafunekiyo ukuba lungene echibini.
Umphetho we-cantilevered ugudile ukunqanda ukusikwa kwimiphetho ebukhali kwaye kubonelela ngotshintsho olungenamthungo ukusuka kumgangatho ukuya echibini. Umphetho we-cantilever nawo kulula ukubambelela kwabo badadayo ngenxa yokugqobhoza ngaphezulu komphezulu wedama.
Ukuhonjiswa kwephuli yekhonkrithi yentsimbi kufuneka kufakelwe ngokufanelekileyo ngusonkontileka onamava. Iifom ezizodwa zisetyenziswa ezenziwe ngeStrofoam esincanyathiselwe okwethutyana kumlomo womphetho wephuli.
Ikhonkrithi ithululelwa kwiifom, kwaye nje ukuba ikhonkrithi isetiwe, iifom ziyasuswa. Iifom zishiya ukugqitywa kwe-bullnose.
Iifom ezisetyenziselwa ukukopisha kunokuba nzima ukusebenzisa. Ukuba ikhontraktha yedama ayiyifaki ngokufanelekileyo le fomu, inokushiya umphezulu ongagunyaziswanga okanye onejagni. Umphezulu awuzukujonga nje kuphela, kodwa kunzima nokulungisa nje ukuba isamente inyange.
Imiphetho yamachibi eCantilever inokuqhekeka okanye itshintshe, ifuna ukulungiswa. Ukuba ikontraka ayigaleli ikhonkrithi ngokufanelekileyo, kwaye isuse ngocoselelo iifom zeSyrofoam, iziqwengana zekonsathi zingaphuka okanye ziwe.
ndiyakuthanda ngenxa yakhe
Ukuqubha ichibi elinomgangatho wamatye emarmore kunye nendlela yokulwa nesitayile.
Ezinye iingxaki ezinokuthi zenzeke nge-cantilevered decking decking zibandakanya:
Amaqondo obushushu ashushu napholileyo abangela ukwanda kunye nokucutha
Umhlaba ophantsi kwedama unokuhlala kwaye ubangele umphetho wedreyini yedreyini ukuba uqhekeke
Umjelo wamanzi ongafanelekanga unokubangela ukutshintsha komhlaba kunye nesanti ebangela iintanda
Ikhonkrithi yokuhombisa amanzi amdaka ekhonkrithi ikholisa ukungcola, ngakumbi ngokuhamba kwexesha
Abanini bamachibi banokufumana ikhonkrithi yokuhombisa i-cantilevered decking irhabaxa kakhulu kulusu lwabo xa bengena bephuma echibini
Ukuthintela ukuqhekeka, indibaniselwano phakathi kokulwa kunye nomgangatho wekhonkrithi kufuneka itywinwe nge-seast elastomeric evaliweyo evumela ukwanda kunye nokucutha.
Ukuguquguquka kwesitywina kuvumela ukuhamba ngaphandle komonakalo. Isitywina se-elastomeric sikwathintela ukuba amanzi angangeni ekuqhekekeni.
Amalungu okwandisa angabekwa phakathi kokukopisha kunye nomgangatho wokuthintela ukuqhekeka. Zibekwe rhoqo kwiinyawo ezintandathu zijikeleze umda wedama kwaye zongezwa kumgangatho xa kugalelwa ikhonkrithi.
La malungu olawulo anceda ukunqanda ukutyhoboka ngasemva kwebhedi yeebhanti zamachibi apho i-cantilever decks iqhekeka khona.
Ukufakwa kwephuli engaphantsi komhlaba kufuneka kwenziwe ziingcali ezinelayisensi ezaziyo ukulungisa umngxuma wesakhelo sedama. Ukufakelwa kwamachibi okungonelanga kunokubangela ukushenxiswa kunye nokucwila, kuchaphazele yonke indawo echibini, kubandakanya umphetho wamanzi echibi.
Ukuba wenza isicwangciso sakho sesiko, zahlukile Isoftware yoyilo lokuqubha oko kunokunceda. Uninzi lwezi luya kukuvumela ukuba uzame ukugqiba iiphuli ezahlukeneyo ukuze ubone ngoyilo lwakho kwaye uncede ufumane inkangeleko oyifunayo.
ufuna ntoni kwilayisensi yomtshato
iingoma zelizwe malunga notata nentombi
ngubani umntu otshata nawe